Saddex sababood oo Man United ka horjoogsaday inay la wareegto weeraryahanka reer Gabon ee Aubameyang – Gool FM
Saddex sababood oo Man United ka horjoogsaday inay la wareegto weeraryahanka reer Gabon ee Aubameyang
(Manchester) 28 Okt 2019. Wargeyska “The Athletic” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday maanta oo Isniin ah sababihii ka horjoogsaday kooxda Manchester United inay la soo saxiixato weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ka hor inta uusan ku biirin naadiga Arsenal bishii Janaayo 2018.
Aubameyang ayaa lala xiriiriyay xagaagii 2017 inuu u dhaqaaqayo kooxda Manchester United, waxaana xilligaas macalin ka ahaa Jose Mourinho, laakiin ugu dambeyntii wuxuu go’aansaday inuu ku biiro naadiga ka dhisan waqooyiga magaalada London ee Gunners.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa wuxuu haatan waqti fiican ku qaadanayaa kooxda Arsenal, kaddib markii uu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore waxaana ku wehlinayay xiddigaha Liverpool ee Sadio Mane iyo Maxamed Saalax, sidoo kale wuxuu xilli ciyaareedkan u dhaliyay kooxdiisa 8 gool ee ah tartamada kala duwan, 12 kulan uu ilaa iyo haatan ciyaaray.
Haddaba sida laga soo xiganayo wargeyska “The Athletic” ee dalka England, sababta ugu horreysa ee Man United ka hor istaagtay inay la soo saxiixato Pierre-Emerick Aubameyang xilligii uu ku sugnaa naadiga Borussia Dortmund ayaa waxay aheyd qiimaha xoogan ee la dul dhigay kaasoo gaarsiisnaa 70 milyan oo ginni.
Sababta labaad ee Manchester United ka hor istaagtay inay gacanta ku dhigto adeega weeraryahanka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa waxay tahay inuusan ku habooneen qorshaha macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
Halka Sababta saddexaad lagu sheegay inay tahay in Aubameyang uu lugta la galay sannadkiisa 30-aad, xilli ciyaareedkiisa labaad ee kooxda Arsenal, xilli Manchester United ay dooneysay inay la soo saxiixato weeraryahan da’ayar ah ee awoodi kara inuu wax badan siiyo sannado badan.
De Bruyne oo hogaaminaya liiska 10-ka xiddig ee ugu gool caawinta badan shanta horyaal ugu waa weyn Yurub xilli ciyaareedkan 2019/2020